Voankazo miantra ao Thailandy " Journey-Assist - Ny vokatry ny firehetam-po. Ny tombony.
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Voankazo any Thailand » Passion fruit in Thailand
Passion fruit in Thailand (gulupa)
Passion fruit in Thailand
Voninkazo voankazo. Passionflower. Voninkazo voninkazo 🙂
Misy karazany roa ny voankazo filan'ny nofo. Mavo lehibe (sahala amin'ny haben'ny grapefruit), ary volomparasy volomparasy kely (mitovy habe amin'ny voasarimakirana iray). Ary ireo, izay kely kokoa, dia heverina ho misy poizina kely, nefa miaraka amin'izay dia mamy kokoa, manitra sy be ranony, ary noho izany dia malaza kokoa amin'ireo mpizahatany.
Voankazo mavo maniry any Thailand
Ao amin'ny vanim-potoana dia mipoitra manodidina ny 45 baht. Amin'ny vanim-potoana fety, tsy fahita izany ary lafo kokoa.
Ny fotoam-bokatra maniry any Thailand dia maharitra hatramin'ny Janoary ka hatramin'ny aprily.
Voalohany, tandremo ny voanjo. Tsy tokony ho ketrona na mafy izany. Aleo malama sy mamiratra (ravina matevina sy miketrona dia manondro fa efa ela no nandainga ny voankazo). Misy karazana voankazo mihetsiketsika izay ahitana ny fahamendrehana kely sy ny ketrona amin'ny hodiny dia manondro fahamatorana (raha ny fanazavana, ireo voankazo ireo dia ekena ho mamy kokoa). Fa miaraka amin'izay koa, ny voankazo tsara dia tsy tokony ho mafy sy henjana ketrona.
Ny pulp dia misy voa kely malefaka be dia be. Azo hanina sy mahasalama tokoa izy ireo, ary mora levona ihany koa, koa aza misalasala mihinana azy.
Izy io koa dia misy mineraly ilaina amin'ny fahasalaman'ny olombelona - potasioma, calcium, manezioma, vy, phosforus, sodium, solifara, manganese, chlorine, iode, florine, varahina ary zinc. Ary mazava ho azy, satria samy manana ny endriny voajanahary daholo izy io, dia voarain'ny vatana tsara kokoa noho ny vitamina vita amin'ny tablette.
Izany no tsy hay ampiharina aminy ilay foilin'ny firehetam-pitiavana, fa tena mahafinaritra izany :). Zavatra matsiro :). Tapaho moramora na hosotroina ny lanin'ny foetus, na mihinana sotrokely. Toa ny jaman'ny famoronana tsy fantatra. Matsiro, mamy miaraka amin'ny masira.
Voankazo Super! Nampahatsiahy ahy ny tsiron'ny jamam-boahangy an-dranomasina ny tsiro ... 😉
Ny voankazo mankafy dia ny voankazo matsiro indrindra, raha ny hevitro! Tsy nisy andro izay tao Bali tsy tokony hihinanany ny fianakaviana iray manontolo raha tany izy ireo!
Ary tao an-trano dia nitombo i Passiflora, ary tsy nahalala akory fa voninkazo izy io, nihodina! 🙂
Notsentsinay tamim-pitandremana ilay voankazo, ary nihinana pulpà tamin`ny sotrokely iray. Milamina sy madiodio)